Fantaro i David Kalmar, Toniandahatsoratra Mirotsaka An-tsitrapo Amin’ny Fiteny, Fahaizamanaony Ilaina Indrindra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Febroary 2018 13:41 GMT
Tafan'ny Global Voices tamin'ny tonian-dahatsoratra mpiaraka mamoaka aminn'ny Lingua Hongroà, Dávid Kalmar, momba ny traikefany miaraka amin'ny GV sy misimisy kokoa!
Global Voices: Ambarao kely aminay ny mombamomba anao, ahoana no nahatafidiranao ato amin'ny Global Voices ary ny momba ny dingan'ny fandraisanao anjarana ao anatin'ny vondrom-piarahamonina.
David Kalmar: Miarahaba! David no anarako, mpandikateny an-tsoratra/am-bava ary mpamoaka lahatsoratra ao GV avy ao Hongria. Tany aloha, efa nanandrana endrika asa an-tsitrapo maromaro aho, ary hitako fa ny fahaizako fiteny no fahaizamanao tena ilaina afaka omeko na inona na inona ny antony . Tamin'ny alalan'i Marietta Le, mpamoaka lahatsoratray no nahafantarako ny GV, ary nandika teny sy namoaka lahatsoratra foana aho nanomboka teo.
GV: Did your experience of translating and editing change your vision of the world during this time?……Nanova ny fijerinao an'izao tontolo izao ve ny traikefanao nandika teny sy namoaka lahatsoratra nandritra izay fotoana izay?
DK: Tsy dia nanova loatra ny fijeriko an'izao tontolo izao ilay izy arakaraky ny nihitarany (enganie) ary nanampy ahy nianatra momba ireo olana na vaovao ao an-toerana izay mety ho tsy nisy fantatro raha tsy izay. Tsy mitovy hevitra mandrakariva amin'ny lahatsoratra izay hiasako aho, fa hitako ho zava-dehibe ny mahalala hevitra maromaro momba fotokevitra iray.
GV: Afaka somary velabelarinao ihany koa ve ny fomba hitantananao ny fotoananao ho an'ireo asa rehetra ireo miaraka amin'ny asanao mahazatra? Misy sosokevitra?
DK:Manam-bintana aho amin'ny fahafahako mandahatra ny androko amin'ny maha mpiasa mahaleotena ahy, ka resaka fanomezana fotoana kely isaky ny herinandro mba hiasana eo amin'ny GV. Indraindray ‘maina’ be sy ara-teknika ny zavatra hafa adikako teny amin'ny maha matihanina ahy, ka mahafinaritra ny miova amin'ny zavatra mahaliana kokoa. Manampy koa ilay izy satria afaka misafidy ny asa hiasako aho, araka izany misafidy ireo tantara izay mifandray amin'ny resa-bahoaka Hongroà mitranga aho, na izay toa mahaliana ahy manokana.
GV: Nahoana ianao no mihevitra fa tokony mamaky GV amin'ny fiteninao ny olona iray eny an-dalàna?
DK: Hitako fa afaka manokatra ny mason'ny olona iray amin'izao tontolo izao ny fahafahana mamaky lahatsoratra amin'ny fiteny maro, ary antenaiko nyhamindra traikefa kely amin'ireo olona izay tsy nanana fahafahana nianatra fiteny vahiny mba hamakiana azy ireny. Noho izany, mazava ho azy, tokony hamaky GV (ary vaovao hafa) amin'ny fiteny rehetra afaka vakiany ny olona, fa manantena aho fa afaka manampy olona ny asako, isan'izany ireo olona izay miteny Hongroà fotsiny.
GV: Inona no ataonao rehefa tsy mandika teny ianao? Inona no ataonao amin'ny fotoana malalaka? Inona no nofinofinao?
DK: Manao mozika ary mandeha bisikileta aho – hifaninana anaty hazakazaka bisikileta indray andro any no nofinofiko vaovao, tahaky ilay hazakazaka mandalo kaontinanta ( eo amin'ny 3500km mitaingina tsy misy fanampiana, eo amin'ny 300km mahery isan'andro)
GV: Ahoana ny fandehan'ny tranonkalan'ny GV-nao ao? Tantarao ny asanao ao amin'ny ekipanao Lingua ary lazao anay ny mombamomba ny drafitrao sy ny fanantenanao manaraka ho an'ny tranonkala?
DK: Izao, mbola ekipa kely izahay fa mazoto miasa eo amin'ny tranonkala Hongroà – taorian'ny tsy fahombiazana vitsivitsy, niverina niaraka izahay ary mikendry 8-10 lahatsoratra isam-bolana.
Miasa miaraka amin'ny fikambanana tsy miankina atlatszo.hu izahay izay manohana anay amin'ny fanandratana anay eny anivon'ireo mety ho mpirotsaka an-tsitrapo sy amin'ny fizaràna ny lahatsoratray.
GV: Nandika teny ho an'ny GV nandritra ny taona maro ianao, inona no teninao ho an'ireo vao nanomboka ?
DK: Sosokevitra vitsivitsy afaka hampiharina ihany (ho anao sy ho ahy): mitandrema an'ny teny nalaina avy amin'ny anglisy ihany, mora kely ny milatsaka amin'ny fampiasana azy ireny rehefa, miaraka amin'ny eritreritra kely, afaka mahita vahaolana tsara kokoa sy tokana izay misy dikany betsaka ho an'ny mpamaky.
GV: Lazalazao anay ny momba ny tanàna ipetrahanao, ary ahoana ny fomba hamaritanao ny firenenao anà vahiny iray.
DK: Hongria. firenena sosialista taloha izay manaporofo fa raha mahafehy ny vaovao rehetra ianao, afaka mandresy lahatra olona miisa 3 tapitrisa mahery fa raha ny marina dia vokatry ny tsikombakomba iraisampirenena ny vokatra ratsy nateraky ny fanapahankevitra tsy mahavita azy, namadika an'ireo olona antitra manan-kaja ho vahoaka mampalahelo izay mihika tahaky ny ondry isaky ny andrana any anaty adihevitra, ary mahatonga azy ireo hino fa ratsy tahaky ny Firaisana Sovietika ny Vondrona Eoropeanina, afa-tsy ny vola rehetra azontsika. Manana labiera mora koa izahay.
Misaotra betsaka anao Dávid tamin'ity resadresaka nahafinaritra ity!